ပိုပွီးအောငျမွငျခမျြးသာခငျြရငျ လုပျကိုလုပျရမယျ့အခကျြ (၁၀) ခကျြ
HomeKnowledgeပိုပွီးအောငျမွငျခမျြးသာခငျြရငျ လုပျကိုလုပျရမယျ့အခကျြ (၁၀) ခကျြ
လူတိုငျးက ခမျြးသာဖို့နညျးလမျးဖို့ နညျးလမျးတှကေို ရှာကွပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့လူတှမှော လုပျနကေအြရာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ သုတသေီ Tom Corley က ခမျြးသာသူနဲ့ ဆငျးရဲသူကွားက ကှဲပွားခွားနားတဲ့ အလအေ့ကငျြ့တှကေို လလေ့ာခဲ့ပါတယျ။
1. မိတျဆှသေဈတှနေဲ့ တှပေ့ါ။
အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ မိတျဆှအေသဈတှနေဲ့ တှရေ့တာကို နှဈသကျပါတယျ။ လူအမြားနဲ့ ဆကျဆံတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ပိုရှိလာပါတယျ။ မိတျဆှတှေရေဲ့အောငျမွငျမှုကိုလညျး အသိအမှတျပွုပေးဖို့ လိုပါတယျ။
2. ကံကွမ်မာကို မယုံကွညျပါနဲ့။
မအောငျမွငျတဲ့သူတှကေ အင်ျကြီအနီ ဝတျရမလား၊ အပွာဝတျရမလား ဆိုတဲ့ကိစ်စမှာတောငျ အယူသီးတတျကွပါတယျ။ ခမျြးသာတဲ့သူတှကေ ဘဝလမျးကွောငျးအတှကျ ကိုယျတိုငျ ဆုံးဖွတျခကျြခသြူတှပေါ။ မခမျြးသာတဲ့သူတှကေ ကံကွမ်မာကိုပဲ အပွဈတငျပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို မထိနျးခြူပျနိုငျကွပါဘူး။
3. အလုပျကို မမုနျးပါနဲ့။
အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ ကိုယျ့အလုပျကိုယျ ခဈြကွပါတယျ။ မအောငျမွငျတဲ့ သူတှကေ အလုပျရဲ့ မကောငျးတဲ့အခကျြတှကေိုပဲ မွငျတတျကွပါတယျ။
4. ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျပါ။
ဆရာဝနျဆီ မှနျမှနျသှားတာ၊ အားကစားလုပျတာ၊ တဈပတျ4ကွိမျလကေ့ငျြ့ခနျး လုပျတာတှအေတှကျ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ အခြိနျပေးတတျကွပါတယျ။ ကနျြးမာရေး မကောငျးရငျ ငှအေပိုကုနျပွီး ဘာအလုပျမှ လုပျလို့မရပါဘူး။
ဆငျးရဲတဲ့သူတှရေဲ့ 6% ကသာ စီးပှားရေးမှာ စှနျ့စားခငျြကွတာပါ။ ခမျြးသာတဲ့သူ 50% ကြျောကြျောဟာ စှနျ့စားဖူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဘဝမှာ အနညျးဆုံး တဈခါတော့ စှနျ့စားရငျးနဲ့ ဆုံးရှုံးတတျတယျ ဆိုတာကို ခမျြးသာသူတှေ သတိထားမိပါတယျ။ ဆုံးရှုံးမှုက အောငျမွငျမှုရဲ့အစ ပါပဲ။
6. Reality show တှေ မကွညျ့သငျ့ပါ။
ဆငျးရဲတဲ့လူတှရေဲ့ 78% က TV ရှမှေ့ာ အခြိနျဖွုနျးရတာကို သဘောကပြါတယျ။ ခမျြးသာတဲ့သူတှကေ TV ကို သိပျမကွညျ့ကွပါဘူး။ ကွညျ့ရငျလညျး တဈနာရီထကျ မပိုပါဘူး။
7. စာမြားမြား ဖတျပါ။
"စာမဖတျရငျ မတှေးချေါတတျဘူး" လို့ Dostoyevsky က ပွောဖူးပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့ သူတှကေ စာရေးဆရာတှကေို သဘောကပြွီး ကိုယျ့ကိုယျကို တညျဆောကျမှု၊ သမိုငျး၊ စာပတှေကေို တဈနကေို့ အနညျးဆုံးမိနဈ 20 ဖတျကွပါတယျ။
8. အိပျယာထ နောကျမကပြါနဲ့။
ဝငျငှမွေငျ့တဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှကေ အလုပျမသှားခငျ အနညျးဆုံ3းနာရီ စောထတတျကွပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ မနကျခငျးမှာ လုပျစရာရှိတာတှေ ကွိုစီစဉျခွငျး၊ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးအတှကျ အလုပျလုပျခွငျး၊ အားကစားလုပျခွငျးအတှကျ အခြိနျပေးပါတယျ။ အောငျမွငျသူအမြားစုက တဈနကေို့ 10 မိနဈ၊ 15 မိနဈခနျ့ တရားထိုငျတတျကွပါတယျ။7နာရီ၊ 8 နာရီခနျ့ကွာအောငျ အိပျပွီး ညဆိုရငျ9နာရီနဲ့ 10 နာရီကွားမှာ အိပျယာဝငျတတျပါတယျ။
9. အဆိုးမွငျတတျသူတှနေဲ့ မပတျသကျဘူး။
အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ အဆိုးမွငျတဲ့သူတှနေဲ့ မပတျသကျပါဘူး။ အဆိုးမွငျတတျတဲ့သူတှကေ အကြိုးမရှိတဲ့ အတငျးအဖငျြးစကားတှနေဲ့ပဲ အခြိနျကုနျတတျကွပါတယျ။ သငျ့အခြိနျတှကေို အတငျးအဖငျြးစကားတှနေဲ့ ကုနျဆုံးမယျ့အစား တဈယောကျတညျး သီးသနျ့အခြိနျကုနျလိုကျတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
ဆငျးရဲတဲ့သူတှကေ ရတဲ့ငှထေကျ ပိုသုံးကွပါတယျ။ တနျဖိုးကွီးတဲ့ကား၊ ဖုနျးနဲ့ တခွားအရာတှကေို မလိုအပျရငျ မဝယျတာကောငျးပါတယျ။ ခမျြးသာတဲ့သူတှကေ ဝငျငှကေို အောကျပါအတိုငျး ခှဲတမျးခပြါတယျ။
ကနျြတဲ့ငှတှေကေိုတော့ အဝတျအစား၊ ဆေးဝါးနဲ့ ပညာရေးအတှကျ သုံးပါတယျ။
Tom Corley က အောငျမွငျသူတှရေဲ့ အမူအကငျြ့တှကေို လလေ့ာပွီးနောကျ အခကျြတဈခကျြကို တှသှေ့ားပါတယျ။ အောငျမွငျတဲ့သူတှကေ ဝါသနာပါတဲ့ အရာကို စူးစူးစိုကျစိုကျလုပျပွီး ဝငျငှကေောငျးလာတာပါပဲ။
1. သငျဝါသနာပါတဲ့ အရာတှကေို စာရငျးလုပျပါ။
2. ပိုပွီး ဝါသနာပါတဲ့အရာ 10 ခုကို ထပျခှဲထုတျပါ။
3. ထိုအလုပျ 10 ရဲ့ခနျ့မှနျးဝငျငှတှေကေို တှကျကွညျ့ပါ။
4. ဝငျငှအေမြားဆုံး ရနိုငျပွီး သငျလညျး ဝါသနာပါတဲ့ အလုပျက သငျ့ဘဝအတှကျ အောငျမွငျမယျ့အလုပျပါပဲ။
ပိုပြီးအောင်မြင်ချမ်းသာချင်ရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အချက် (၁၀) ချက်
လူတိုင်းက ချမ်းသာဖို့နည်းလမ်းဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့လူတွေမှာ လုပ်နေကျအရာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ သုတေသီ Tom Corley က ချမ်းသာသူနဲ့ ဆင်းရဲသူကြားက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
1. မိတ်ဆွေသစ်တွေနဲ့ တွေ့ပါ။
အောင်မြင်တဲ့သူတွေက မိတ်ဆွေအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာပါတယ်။ မိတ်ဆွေတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ လိုပါတယ်။
2. ကံကြမ္မာကို မယုံကြည်ပါနဲ့။
မအောင်မြင်တဲ့သူတွေက အင်္ကျီအနီ ဝတ်ရမလား၊ အပြာဝတ်ရမလား ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတောင် အယူသီးတတ်ကြပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက ဘဝလမ်းကြောင်းအတွက် ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေပါ။ မချမ်းသာတဲ့သူတွေက ကံကြမ္မာကိုပဲ အပြစ်တင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းချူပ်နိုင်ကြပါဘူး။
3. အလုပ်ကို မမုန်းပါနဲ့။
အောင်မြင်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ချစ်ကြပါတယ်။ မအောင်မြင်တဲ့ သူတွေက အလုပ်ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပဲ မြင်တတ်ကြပါတယ်။
4. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
ဆရာဝန်ဆီ မှန်မှန်သွားတာ၊ အားကစားလုပ်တာ၊ တစ်ပတ်4ကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာတွေအတွက် အောင်မြင်တဲ့သူတွေက အချိန်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းရင် ငွေအပိုကုန်ပြီး ဘာအလုပ်မှ လုပ်လို့မရပါဘူး။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေရဲ့ 6% ကသာ စီးပွားရေးမှာ စွန့်စားချင်ကြတာပါ။ ချမ်းသာတဲ့သူ 50% ကျော်ကျော်ဟာ စွန့်စားဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဘဝမှာ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ စွန့်စားရင်းနဲ့ ဆုံးရှုံးတတ်တယ် ဆိုတာကို ချမ်းသာသူတွေ သတိထားမိပါတယ်။ ဆုံးရှုံးမှုက အောင်မြင်မှုရဲ့အစ ပါပဲ။
6. Reality show တွေ မကြည့်သင့်ပါ။
ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရဲ့ 78% က TV ရှေ့မှာ အချိန်ဖြုန်းရတာကို သဘောကျပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက TV ကို သိပ်မကြည့်ကြပါဘူး။ ကြည့်ရင်လည်း တစ်နာရီထက် မပိုပါဘူး။
7. စာများများ ဖတ်ပါ။
"စာမဖတ်ရင် မတွေးခေါ်တတ်ဘူး" လို့ Dostoyevsky က ပြောဖူးပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ သူတွေက စာရေးဆရာတွေကို သဘောကျပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို တည်ဆောက်မှု၊ သမိုင်း၊ စာပေတွေကို တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံးမိနစ် 20 ဖတ်ကြပါတယ်။
8. အိပ်ယာထ နောက်မကျပါနဲ့။
ဝင်ငွေမြင့်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အလုပ်မသွားခင် အနည်းဆုံ3းနာရီ စောထတတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေက မနက်ခင်းမှာ လုပ်စရာရှိတာတွေ ကြိုစီစဉ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအတွက် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ အားကစားလုပ်ခြင်းအတွက် အချိန်ပေးပါတယ်။ အောင်မြင်သူအများစုက တစ်နေ့ကို 10 မိနစ်၊ 15 မိနစ်ခန့် တရားထိုင်တတ်ကြပါတယ်။7နာရီ၊ 8 နာရီခန့်ကြာအောင် အိပ်ပြီး ညဆိုရင်9နာရီနဲ့ 10 နာရီကြားမှာ အိပ်ယာဝင်တတ်ပါတယ်။
9. အဆိုးမြင်တတ်သူတွေနဲ့ မပတ်သက်ဘူး။
အောင်မြင်တဲ့သူတွေက အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေနဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။ အဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူတွေက အကျိုးမရှိတဲ့ အတင်းအဖျင်းစကားတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အချိန်တွေကို အတင်းအဖျင်းစကားတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးမယ့်အစား တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်အချိန်ကုန်လိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ရတဲ့ငွေထက် ပိုသုံးကြပါတယ်။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကား၊ ဖုန်းနဲ့ တခြားအရာတွေကို မလိုအပ်ရင် မဝယ်တာကောင်းပါတယ်။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေက ဝင်ငွေကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲတမ်းချပါတယ်။
ကျန်တဲ့ငွေတွေကိုတော့ အဝတ်အစား၊ ဆေးဝါးနဲ့ ပညာရေးအတွက် သုံးပါတယ်။
Tom Corley က အောင်မြင်သူတွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေကို လေ့လာပြီးနောက် အချက်တစ်ချက်ကို တွေ့သွားပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့သူတွေက ဝါသနာပါတဲ့ အရာကို စူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းလာတာပါပဲ။
1. သင်ဝါသနာပါတဲ့ အရာတွေကို စာရင်းလုပ်ပါ။
2. ပိုပြီး ဝါသနာပါတဲ့အရာ 10 ခုကို ထပ်ခွဲထုတ်ပါ။
3. ထိုအလုပ် 10 ရဲ့ခန့်မှန်းဝင်ငွေတွေကို တွက်ကြည့်ပါ။
4. ဝင်ငွေအများဆုံး ရနိုင်ပြီး သင်လည်း ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်က သင့်ဘဝအတွက် အောင်မြင်မယ့်အလုပ်ပါပဲ။